Ghibli ရုပ်ရှင်ထဲမှာ နေချင်စရာအကောင်းဆုံးအဖြစ် TOP 10 စာရင်းဝင်ခဲ့တဲ့အိမ်လေးများ !!! - JAPO Japanese News
သော 19 Nov 2021, 12:11 ညနေ
Studio Ghibli ရဲ့ animation တွေဟာ ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာသာမကဘဲ အမျိုးမျိုးသောသရုပ်ဖော်ပြခြင်းမှာ ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေများစွာရှိနေပါတယ်။ အစားအစာတွေကိုတောင် အရသာရှိမယ့်ပုံစံအထိ ရေးဆွဲနိုင်ကြပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်ပြောပြပေးချင်တာကတော့ ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာပါ ဇာတ်ကောင်လေးတွေရဲ့ နေချင်စရာလှပလွန်းတဲ့အိမ်လေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရှေးခေတ်စတိုင်ဂျပန်အိမ်၊ ရွေ့လျားနေတဲ့အိမ်၊ ဆန်းကျယ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အိမ် စတဲ့ရုပ်ရှင်ရဲ့ဇာတ်လမ်းတည်ဆောက်ပုံနဲ့လိုက်ပြီး၊ အသီးသီးကိုယ်ပိုင်စတိုင်နဲ့ အိမ်တွေကိုရေးဆွဲထားကြပါတယ်။ စာဖတ်သူတို့အထဲမှာရော Ghibli ရဲ့အိမ်တွေကိုသဘောကျတဲ့လူ ရှိပါသလား။
ဒီနေရာမှာ Japan Trend Research အသင်းနဲ့ Kiraku House (အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်)တို့ပူးပေါင်းပြီး၊ Ghibli ရဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်ဖူးတဲ့ ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးက အမျိုးသားအမျိုးသမီးပေါင်း ၁၈၁၂ ဦးကို Ghibli ရဲ့အိမ်တွေထဲက ဘယ်အိမ်မှာအနေချင်ဆုံးလဲ ဆိုပြီးမေးမြန်းထားပါတယ်။ ထိုမေးမြန်းထားတဲ့ရလဒ်ကို Japo စာဖတ်သူတို့ကိုလည်း ပြောပြပေးသွားပါ့မယ်။
သင်သာနေခွင့်ရမယ်ဆို Ghibli အိမ်တွေထဲက ဘယ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်မလဲ?
နံပါတ် (၁) Satsuki နဲ့ Mei တို့ရဲ့အိမ်ကလေး “ My Neighbor Totoro”
နံပါတ် (၁) လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တာကတော့ Satsuki နဲ့ Mei တို့ရဲ့အိမ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကတော့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားပါတယ်။ အိမ်ထဲကနေတစ်ခုခုများထွက်လာအုံးမလားဆိုပြီး ရင်ခုန်နေရသလို၊ နေ့တိုင်းပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ဒီဇာတ်ကားထဲကနေရရှိနိုင်ပါတယ်။ “ မဟုတ်မှလွဲရော Totoro နဲ့ပါထိပ်တိုက်ဆုံနိုင်မယ်” စတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကလည်း လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
– ခြံအကျယ်ကြီးနဲ့အတူ Showa ခေတ်က အနောက်တိုင်းပုံစံအိမ်ကိုအမှတ်ရစေပြီး၊ ဂျပန်စတိုင်အခန်းလည်းပါဝင်တယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက အားကျပြီးနေချင်ခဲ့ရတဲ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ် (၂) Sosuke နဲ့ မေမေ Lisa တို့ရဲ့အိမ် “ Ponyo”
နံပါတ် (၂) ကိုရရှိသွားတာကတော့ “ Ponyo” ဇာတ်ကားထဲမှာပါဝင်တဲ့ Sosuke နဲ့ မေမေ Lisa တို့ရဲ့ပင်လယ်ကမ်းဘေးက အိမ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြင်ကွင်းကလည်းကောင်းသလို နေ့တိုင်းလှပတဲ့ပင်လယ်ရှုခင်းကိုငေးမောနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတိုက်ခက်လာတဲ့လေကလည်း စိတ်ကိုကြည်လင်စေတယ် စတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့် ဒုတိယလူကြိုက်များတဲ့အိမ်ကလေးဖြစ်လာပါတယ်။ ပင်လယ်ဘေးမှာရှိတဲ့ တောင်ကုန်းပေါ်ကအိမ်ကလေး.. တကယ်နေချင်စရာပဲနော်
နံပါတ် (၃) Jiro Horikoshi နဲ့ Naoko တို့ရဲ့အိမ်၊ Kurokawa အိမ်ရဲ့အဝေး “ The Wind Rises”
နံပါတ် (၃) ရရှိသွားတာကတော့ “ The Wind Rises” ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ Jiro Horikoshi နဲ့ Naoko တို့ရဲ့အိမ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ လှပတဲ့ခြံကျယ်နဲ့သပ်ရပ်တဲ့ဂျပန်အိမ်မှာ အေးအေးဆေးဆေးနေချင်တယ်။ လသာဆောင်မှာ အေးအေးလူလူ လက်ဖက်ရည်သောက်ချင်တယ်။ ဆိုတဲ့မှတ်ချက်တွေပေးလာပါတယ်။ ဂျပန်တစ်ထပ်အိမ်လေးမှာနေချင်တယ် ဆိုတဲ့လူတွေလည်း အများအပြားရှိနေပါတယ်။
နံပါတ် (၄) “ Howl’s Moving Castle”
နံပါတ် (၄) နေရာကတော့ Howl’s Moving Castle” ဇာတ်ကားထဲက ရွေ့လျားနေတဲ့ရဲတိုက်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရွေ့လျားနေတဲ့ရဲတိုက်ကြီးရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမှုနဲ့အတူ အတွင်းတံခါးကနေ တစ်ခဏချင်းပဲ သွားလိုတဲ့နေရာဆီပြောင်းလဲနိုင်တာကလည်း အင်မတန်မှစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါတယ်။
နံပါတ် (၅) KiKi အိမ်ကလေး “ KiKi’s Delivery Service”
၁၉၈၉ ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကာမှာပါဝင်တဲ့ KiKi ရဲ့အိမ်ကလေးဟာ နံပါတ် (၅) နေရာမှာရွေးချယ်ခံရပါတယ်။ စုန်းမလေးရဲ့အိမ်ဖြစ်ပြီး ဆန်းကြယ်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ လက်တွေ့တော့မကျဘူး ဒါပေမဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အိမ်ကလေးနဲ့တော့ တစ်ထပ်တည်းပဲ… သဘောကျတယ် ဆိုပြီးမှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။
TOP 10 စာရင်းဝင်ခဲ့တဲ့ အိမ်တွေကိုပါ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
နံပါတ် (၃) Jiro Horikoshi နဲ့ Naoko တို့ရဲ့အိမ် “ The Wind Rises”
နံပါတ် (၆) Pazu ရဲ့အိမ် “ Castle in the Sky”
နံပါတ် (၇) Haru ရဲ့ အိမ် “ The Cat Returns”
နံပါတ် (၈) Arrietty ရဲ့အိမ်ကလေး “ Arriety”
နံပါတ် (၉) Anna ရဲ့အိမ်ခန်းလေး “ When Marnie Was There”
နံပါတ် (၁၀) စိုစွတ်နေတဲ့စံအိမ် “ When Marnie Was There”
သင်ရော Ghibli အိမ်တွေထဲကဘယ်တစ်ခုကို သဘောကျပါသလဲ?